स्थानीय विकाश र प्रकृति विनाश ‘कयर ब्लुज’ « LiveMandu
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार २२:१८
स्थानीय विकाश र प्रकृति विनाश ‘कयर ब्लुज’
Published On : २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार २२:१८
प्रकृति संरक्षण आम मानिसको चासो भित्रको विषय होइन । संरक्षण गर्नुपर्ने नै बुलडोजर बनेर मैदानमा उत्रिएका हुन्छन् । यदाकदा प्रकृति दोहनका विरोध त सुनिन्छन् । तर ती आवाज सुन्नुपर्ने निकायसम्म पुग्न पाउँदैनन् । नियमकारी संस्था र न्यायालयसम्मै बिचौलियाको हालिमुहाली हुन्छ । नागरीक स्वतन्त्रताको हुर्मत लिन हमेशा तम्तयार ! उदाहरण हुन्, महोत्तरीका मृत अभियान्ता ……… महतो र उनको परिवार ।
लेखकः सुजन अधिकारी
कंकालीको डाँडालाई देखाउँदै बादल भन्थे “हेर्नुहोस्, त्यो शितल डाँडामा बास बसेर यहाँ सररर केबलकारमा चढेर यहाँ आएर खेतीपाती गर्न पाए कस्तो हुन्छ होला ?” चुनावताका बादलका वाणी थिए यी । पिठुवामा भाषण गर्दाका शब्द गृहमन्त्री बादलले आफैले कति सम्झन्छन् ? ज्ञात छैन । तर, हामी स्थानीयलाई उनका वाणीमात्र होइन, उनले शब्दमा दिएको जोड (स्ट्रेस) समेत याद छ ।
लहडले हो वा बुझेरै हो अचेल युवा चासो रुपमा यसले स्थान पाएको छ । तर, विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरु कहिल्यै नबोल्ने गरी निदाउछन् । परिवारका जीवित सदस्य एक्लै हिड्न सक्ने अवस्था रहँदैन । स्थानीयहरु तैँ चुप मै चुप छन् । एक गलत समूहको विरोध गर्न अर्को गलत समूूहको ओत लाग्नुपर्छ । किनकी विरोधको आवाज बोल्नेलाई समाजमा बाँच्न मुस्किल छ । विरोध त केवल विरोधका लागि मात्र स्वीकार्य छ । परिवर्तनका लागि होइन । देश कर्मचारीतन्त्रले पीरोल्लिएको छ । गाउँघर लुटतन्त्रले ।
दोहनकर्ताको जथ्थाले विरोधकर्ताको विरोध आँटसम्मलाई पनि अपराध मान्छ । अचानक घरको धारामा पानी आउन छाड्छ । वरपरकाले अर्म पर्ममा बोलाउन छाड्छन् । बच्चाहरुले स्कूलमा छात्रवृत्ति पाउन छाड्छन् । स्थानीय सहरकारीमा शेयर किन्न सकिदैन । विकाशका परियोजनाले घर अगाडीको बाटो पहिल्याउन छाड्छ ।
यस्तै घटनाहरुको अर्को एक प्रतिनिधी उदाहरण हो, कयर खोलाको कथा ।
कयर खोलामा पुल बन्ने खबरले मनमा उत्साह छायो । पूर्वअर्थमन्त्रिको रोहवरमा विनियोजन भएको रहेछ । चैनपुरका बासिन्दालाई पुलको मुख्य आवश्यकता स्कूल र दुग्ध सहकारीको कारण पर्छ । शिक्षा र स्वास्थसँगै सहज सडक तथा यातायात पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । दैनिक जीवनयापन गर्न सबै सुविधा खोला पारीको गाउँमा छ । अझैसम्म पनि अपवाद बाहेकका स साना स्कुले केटाकेटी बर्खाका ४ महिना भेलमा हेलिएरै स्कुल पुग्छन् । आफूहरु राजधानी बसेता पनि त्यहाँका मानिसले सास्ती खेप्न पर्दैन सोचेर मन तरङ्गित भयोे ।
करिब दुई सय घरधुरी रहेको बस्तीका लागि एक झोलुङ्गे पुल काफी थियो । तीनताक कुरा पनि चलेको थियो रे । तर, पिठुवालीले आफ्नो जग्गामा बन्न नदिने भएपछि पुल बस्ती छाडेर जंगल पस्यो । भुत्याहा खोलाको बिचमा । सेना समायोजन भएर गाउँ फर्किईसकेपछि पुल तयार भयो । न्यूरेनी पट्टिका एकाध घररिवार बाहेक केही प्रेमजोडिले पर्यटनका लागि पुलको उपयोग गरे ।
उत्पादिन खाद्यान्न विक्रि गर्ने र घरायसी किनमेल गर्नेहरुले खोला तर्नै पर्छ । एक दिनको दुध खोला नतर्दा दिनभरको ज्याला भर्पाइ गर्ने अर्को माध्यम अझै पनि गाउँलेसँग छैन । दुग्ध सहकारी र स्कूल गरेर सरदर पाँच छ पटक दैनिक खोला तर्ने म एक्लो थिइन । खोला घट्ने आस गरि बस्नेले सोध्ने प्रश्न प्राय एउटै हुनथ्यो, खोलो कत्रो छ केटो, तर्न सकिन्छ ?
त्यसो त कागजी ठेगानामा मात्रै हाम्रो गाविस चैनपुर थियो । हामी बासिन्दा पिठुवाका नै थियौँ भन्दा अन्यथा अर्थ नलाग्ला । नागरिकताको लागत र मतदाता नामावलीकोे एउटाकुरा, नत्र त हाम्रो सुविधा र सुविस्ता जे भनौँ स्कुल, डेरी र मिल सबै कयर खोला पारी पिठुवामै थियो । हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण सुविस्ताको उपलब्धता खोला पार नै थियो । शिक्षा, आय आर्जन देखि जीविको उपार्जन र आवतजावत सबै पिठुवासँग जोडिएको थियो । उनीहरु घाँस दाउरा खोज्न हाम्रोतिरको वन धाउँथे । र वर्षमा १ महिनाजस्तो धारामा पानी नआउँदा चैनपुर चाहिन्थ्यो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब ८ किलोमिटर भित्रको मेरो गाउँले सडकको अनुहार राम्ररी देखेको थिएन । पक्कि सडकको तिर्सना मेट्न राजमार्ग नै धाउनु पथ्र्यो । गाविसहरुको बिचमा रहेको कयर खोला पार गर्न सात आठ किलोमिटर परको महेन्द्र राजमार्ग छुनै पथ्र्यो । बिचमा पक्कि या कच्चि पुलको सुविस्ता छँदै थिएन ।
जनयुद्ध (तत्कालीन माओवादीले दिएको नाम) को समापनसँगै देशैभरी परिवर्तनको तरङ्ग छायो । हामी अछुत रहेनौं । घर माथिको डाँडामा सेनाको क्याम्प बस्यो । जनमुक्ति सेना नेपाल, क. वासु स्मृती ब्रिगेड डिभिजन ३ शक्तिखोर । त्यसमध्येका केही हजार हाम्रो गाउँ माथिको डाँडामा आइपुगे । बाँकी कालिका नगरपालिका (तत्कालीन जुटपानी गाविस )मा पुगे ।
त्यतिबेला चितवन पाँचवटा क्षेत्रमा विभक्त थियो । निर्वाचन क्षेत्र नं – ०२ मा रामबहादुर थापा बादल उम्मेद्वार बनेर आए । त्यसपछिका दिनमा गाउँमा चहलपहल थपियो । गाउँका बाटाघाटा चौडा भए । खोलामा पुल बन्ने हल्लाले गाउँ गुञ्जयमान भयो । रामबहादुर थापा (बादल) सभासद !
कंकालीको डाँडालाई देखाउँदै बादल भन्थे “हेर्नुहोस्, त्यो शितल डाँडामा बास बसेर यहाँ सररर केबलकारमा चढेर यहाँ आएर खेतीपाती गर्न पाए कस्तो हुन्छ होला ?” चुनावताका बादलका वाणी थिए यी । पिठुवामा भाषण गर्दाका शब्द गृहमन्त्री बादलले आफैले कति सम्झन्छन् ? ज्ञात छैन । तर, हामी स्थानीयलाई उनका वाणीमात्र होइन, उनले शब्दमा दिएको जोड (स्ट्रेस) समेत याद छ । बिडम्वना नै यही छ, चुनावमा उठ्ने नेताले आफुले केके आश्वासन दिएँ सम्झनुपर्दैन । तर, मतदाताले त्यही कुरा अर्को चुनाव नआएसम्म बिर्सिँदैनन् । अर्को पटक सोही आश्वासन लिएर नेताहरु आउँछन् । चुनाव जित्छन् । हामी उहि गल्ति दोहोर्याईरहन्छौं ।
देशको मुहान फेर्छु भन्दै कुर्लने एकले अर्कोलाई वैरी देख्न थाले । माओवादीसँगै उसको विकाशे लहर सेलाउँदै गयो । आफ्नै कालमा गाउँको जनजीवन फेरीने सपना बा आमा पछि अचेल म देख्तै छु ।
बादलले संघीय गृहमन्त्रालयको जिम्मामा छन् । नक्कली बिउले आहत किसानलाइ पार्यो । राज्यले बाँडेको राहतले बिउको आधा मुल्य उठ्न मुस्किल छ । केबलकार अझै कति चुनावको पनि भाषण विषयवस्तु बन्छ हेर्न बाँकी छ ।
डाँडाका क्याम्पमा रहेका सेनाको सामान सहज रुपमा ओसार्न पनि दुई गाउँलाई जोड्नुपर्ने बाध्यता देखियो । तल्कालै पुल बनाउन सम्भव थिएन । तल्लो गाउँ छेउ खोलाको छोटो भागमा ढलान गरेर तटबन्धन गरियो । समस्याको पूर्ण समाधान नभए पनि ठूला सवारी साधन वारपार गर्न समस्या रहेन । हामी स्कूले केटाकेटी काँधमा साइकल बोकेर तथ्र्यौ । तर्न नसके घर बस्थ्यौं । वर्षायामको चार महिना सँधै त्यसरी नै बित्दथ्यो ।
देशमा दुई पटक चुनाव भयो । पक्कि पुलको बहस छेडिदैँ थियो । त्यसको केही वर्षपछि बनेको पुलले तल्लो भेगका वासिन्दालाई सहजता प्रदान गर्यो । तर माथिल्लो भेगको समस्या ज्यूँ का त्युँ नै रह्यो ।
करिब दुई सय घरधुरी रहेको बस्तीका लागि एक झोलुङ्गे पुल काफी थियो । तीनताक कुरा पनि चलेको थियो रे । तर, पिठुवालीले आफ्नो जग्गामा बन्न नदिने भएपछि पुल बस्ती छाडेर जंगल पस्यो । भुत्याहा खोलाको बिचमा । सेना समायोजन भएर गाउँ फर्किईसकेपछि पुल तयार भयो । न्यूरेनी पट्टिका एकाध घररिवार बाहेक केही प्रेमजोडिले पर्यटनका लागि पुलको उपयोग गरे । लहडमा हामी पनि फोटो खिच्न पुग्यौं । वर्षदिन नबित्दै, दुई गाउँ जोड्न बनेकोभुत्याहा खोलाको पुल पनि भुत्याहा नै बन्न पुग्यो । गाउँबाट दुई समान विन्दुमा एक झोलुङ्गे पुल थियो अर्को पक्की । तर, जनजीवन बगर हुँदै बहिरह्यो ।
ड्याम निर्माणसँगै खोलाको दोहन समेत सुरु भयो । जिल्ला प्रशाशनको ठेक्काको नाममा मनपरी गिट्टी बालुवा निकासी हुन थाल्यो । स्वीकृत मापदण्डको कागजमा एक व्यवस्था थियो । यता डोजरको चुच्चोले भ्याएसम्म गहिरो खन्थ्यो । ड्यामको छड्के अवरोध र खोलाको गहिराइको कारण बहाव सोझै चैनपुर तेर्सियो ।
संविधानसभा चुनावको वर्ष दिन नबित्दै केन्द्र राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थको चपेटामा पर्न थाल्यो । मन्त्रिमण्डलको विस्तार र विगठनको किचलो सुरु भो । देशको मुहान फेर्छु भन्दै कुर्लने एकले अर्कोलाई वैरी देख्न थाले । माओवादीसँगै उसको विकाशे लहर सेलाउँदै गयो । आफ्नै कालमा गाउँको जनजीवन फेरीने सपना बा आमा पछि अचेल म देख्तै छु ।
लमतन्न बगेको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ठाडो काटेको छ, कयर खोलाले । खोला उत्तरमा शक्तिखोर देखि दक्षिणमा सौराहासम्मै कयर फैलिएको छ । चितवनको दुर्गमको निकास भए पनि कयर र यसको सेरोफेराले विकासको मुख देख्न पाएको छैन । खोलाको वार र पारमा विकाशको लय एकतमास छैन ।
कयर खोला पनि विकाशको नाममा पटक पटक दोहनको शिकार बनेको छ । विकाशको नाममा सुरु हुन थालेको विनाश यात्रा स्वीस सरकारको नदी नियन्त्रण तथा कटान व्यवस्थापन प्रोजेक्टसँगै सुरु हुन्छ ।
नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र स्वीस सरकारको संयुक्त प्रयासमा खोलाको दुवैतर्फ तटबन्धन अगि बढ्यो । वास्तविकतामा पिठूवातर्फ मात्रै । “तीन दल”को सहमतिय समीकरणमा जे निर्णय गर्न पनि सम्भव थियो । राज्यसत्ता देखि स्थानीय तह सम्म भागबण्डाको राजनीतिले ल्याएको दुस्परिणाम थियो, त्यो ।
पिठुुवा निवासी ठालूहरुका आफन्त पनि ती स्वघोषित नेतृत्व नै थिए । उनीहरुको झुकाव उतैपट्टि थियो । वैज्ञानिक समाधानतर्फ दुवैपट्टिका मानिसलाई चासो थिएन । मानिसहरुको ध्याउन्न खोलाको कटानबाट आफू बच्नु हुन्थ्यो । स्वीस नीति लागु गर्न त्यो ठाउँ स्वीजरल्याण्ड पनि थिएन ।
त्यहाँसम्म त ठिकै थियो । ड्याम निर्माणसँगै खोलाको दोहन समेत सुरु भयो । जिल्ला प्रशाशनको ठेक्काको नाममा मनपरी गिट्टी बालुवा निकासी हुन थाल्यो । स्वीकृत मापदण्डको कागजमा एक व्यवस्था थियो । यता डोजरको चुच्चोले भ्याएसम्म गहिरो खन्थ्यो । ड्यामको छड्के अवरोध र खोलाको गहिराइको कारण बहाव सोझै चैनपुर तेर्सियो । पहिलो भेलमै बा ले किनेको टारिखेत खोलाले आफ्नो आहारा बनायो । जिवनभरको कञ्जुस्याँई क्षणभरमै बगर बन्यो ।
स्थानीयको आवतजावत र सामान ढुवानीको निमित्त एक स्टिल ब्रिज नै पर्याप्त हुन्छ । पक्की पुलको त जरुरतै देखिदैन । यसैपनि नेपाल समृद्ध मुलुक होइन । प्रत्येक एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुलको रौनक फगत बजेट खर्च हो । समस्या पर्दा तल्लो पुल भएर एक फन्को लगाउन सकिन्छ । त्यसैपनि सहि र गलत छुट्याउने आधार मानव आवश्यकता नै हो । गीताको व्याख्याले पनि हरेक निर्णय आवश्यकता प्रधान हुनुपर्छ भन्छ । यहाँनेर सम्भावित कमिसन र व्यक्तिगत लाभको जालोलाई स्पष्ट खुट्याउन सकिन्छ ।
लुटतन्त्र झाँगिदो छ । त्यसैले देशका तमाम बेथितीका बिरुद्धका रौद्र नादहरु गुञ्जनु अपरिहार्य छ । चैनपुरको कयर खोला देखि चुरेसम्म । कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्म । सोलु देखि सिंहदबारसम्म । संपदा संहार गरेर सिंहदरबारमा सत्तासिन हुन खोज्नेहरुलाई लछार्न युवा जाग्नुको विकल्प छैन । कोरोना कहरसँगै देशले फेरी एकपटक क्रान्ति माग्दै छ ।
सुनिन्छ, पुल स्कूल छेउ नबनेर मेरो घर मुन्तिर बन्दैछ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा कुनै घाटा छैन । पुलको स्थान अध्ययनले निर्धारण गरेको राम्रो । यद्यपि आवश्यकताको हिसाबले स्कूल छेउ पार्दा दुवै गाउँले बृहत लाभ लिन सकिने देखिन्छ । जहाँ स्कुलको वारीपट्टि दुवै वडाका संयुक्त खेलमैदान समेत पर्छ । माथिल्लो गाउँ र तल्लो गाउँ दुवैले त्यहि मार्ग हुँदै दैनिक आवतजावत र्गछन् । दुवै गाउँले संयुक्त लाभ उठाउन पाउँछन् । तर रोचक कुरा, अहिले जहाँ पुल बन्नेभनिदैँ छ, अथवा भनौं सुनिदै छ । मेरो घरको पारिपट्टि पर्छ । पोल्ट्री व्यवसाय संचालन र अर्को पट्टि मुख्य सडकसम्म घडेरी प्लटिङ गरिएको छ । भनिन्छ, त्यसमा संग्लग्नता तीनै बिचौलियाको छ । जसले खोलो खोतलेर सखाप पारेका थिए । जुन राजनीति तटबन्धनमा गरियो, त्यहि खेल पुल बनाउँदा दोहोरीने पक्कापक्की छ ।
कृषि प्रधान देशमा मनपरी प्लटिङ गरेर वरपरका खेतीयोग्य जमीन लगभग सबै नास भैसके । कृषिको आत्मनिर्भरता उखान बन्न भ्याईसक्यो । त्यसमाथी, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको लागि सम्पूर्ण विकाश परियोजनाकै धज्जी उडाउनु कति जायज हो ?
यति सानो समस्याको लागि लेख नै लेख्न जरुरत थिएन । तर, उल्लेखित कथन भुँईमान्छेको समस्या हो । भुँईमान्छेको समस्या व्यक्तिको होइन देशको समस्या हो । पिठुवा र चैनपुरको मात्रै होइन । देशैभरी, यस्ता समस्या गल्लि गल्लिमा बराल्लिएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा भुँईमान्छेलाई आत्मसम्मान सहित बाँच्न हम्मेहम्मे पर्छ । सिधा र सत्य बोेल्नेहरुलाई त झन् तेस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ । अघोषित बहिस्कारमा पर्छन् । नागरीकलाई देशमा गरीखान दिदैनन् । युवा विरक्तिएर परदेश भासिन्छन् । यस्ता समुहको पहिचान गरीजालो च्यात्न जरुरी छ ।
लुटतन्त्र झाँगिदो छ । त्यसैले देशका तमाम बेथितीका बिरुद्धका रौद्र नादहरु गुञ्जनु अपरिहार्य छ । चैनपुरको कयर खोला देखि चुरेसम्म । कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्म । सोलु देखि सिंहदबारसम्म । संपदा संहार गरेर सिंहदरबारमा सत्तासिन हुन खोज्नेहरुलाई लछार्न युवा जाग्नुको विकल्प छैन । कोरोना कहरसँगै देशले फेरी एकपटक क्रान्ति माग्दै छ । आर्थीक क्रान्ति । सामाजिक क्रान्ति । राजनैतिक क्रान्ति । कृषि क्रान्ति । नैतीक क्रान्ति । अरेलीका काडाँले कोतरीन बानी परेका नागाहरुलाई सिउँडीले नघोचेसम्म दुख्दैन । त्यसैले हामी सिउँडी बनिरहन आवश्यक छ ।
जसरी एक स्त्री अन्यायमा पर्दा स्त्री जातिकै अपमान भएको ठहरिन्छ । त्यस्तै धर्तीमाथी हुँदै आएका यी थिचोमिचो र अत्याचार पनि सामान्य होइनन् । त्यसैले आवश्यक छ एक युवा एकता, चपाएर थुक्न यार्सा भेषी ढुसीहरुलाई । र, फेरी गाउनु छ परिवर्तनको क्रान्ति गीतः
बस्तीबस्ती बाट उठ
यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।
नक्कली नेपाली नोट सहित चितवनमा एकजना पक्राउ
चितवन । रु.१००० दरको ३२१ थान रु.३,२१,०००।- (तीनलाख एक्काईस हजार) नक्कली नेपाली नोट (Counterfeit Currency)
रअ प्रमुख गोयल र प्रधानमन्त्री भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत- भिम रावल
काठमाडौं । नेकपा नेता भिम रावलले प्रधानमन्त्रीले रअ प्रमुख गोयललाई भेटेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
हल्ट प्राईज प्रतियोगितामा क्वेस्ट पनि सहभागी हुँदै
काठमाडौं । सामाजिक उधमको लागि विस्वको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थि-प्रतिस्पर्धा मानिएको हल्ट प्राईज प्रतियोगीतामा यस वर्षको लागि
रअ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री भेटेको पुष्टि
काठमाण्डौ । भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ ९रअ० का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले संक्षिप्तरूपमा